Canada: Oo Gobol Ka Mida Ka dhimaysa qaxootiga, mamnuucayana xijaabka |
Canada: Oo Gobol Ka Mida Ka dhimaysa qaxootiga, mamnuucayana xijaabka
Arbaco, October, 03, 2018 (GNN)– Gobolka ay ku noolyihiin dadka ugu badan ee ku hadla afka Faransiiska ee dalka Canada ayaa qaadaya tallaabooyin wax u dhimaya dadka soogalootiga ah iyo muslimka.
Doorasho Isniintii ka dhacday gobolka Quebec ayaa waxaa ku guuleystay xasbi loo soo gaabiyo CAQ, (Coalitio Averi Quebec) , wuxuu xisbigan ololaha doorashada ku galey xagjirnimo ka dhan ah soogalootiga.
Qodobbada ugu waa weyn ee soogalooti ka dhanka ah ayaa waxa ka mid ah in ay dhimayaan tirada ajaanibta ee ku soo biiraysa bulshada gobolkaas oo hadda dhan 50,000 oo qof sanadkii,waxaana hadda wixii ka dambeya laga dhigaya 10,000 oo qof sanadkiiba.
Waxa kale oo ay sheegeen in shaqaalaha dowladda iyo dadka adeegga ka doonayaba ay ka mamnuucayaan in ay ka muuqato calaamad diimeed,taas oo lugu sheegay inuu ugu horreeyo xijaabka.
Dalka Canada wuxuu ka mid yahay waddamo faro ku tiris ah oo ka badbaaday soogalooti naceybka saa’idka ah ee dalalka reer galbeedka,haddana isbadallada doorashooyinka ka dhacay gobollada waxaa ay tilmaamayaan tirada dadka dhadhanka u haya xisbiyada ka soo horjeeda ajaanibta.